SomaliTalk.com oo Waraysi la Yeelatay Wasiirka Horumarinta Reer Miyiga DFKMG, Maxamed Maxamuud (Gacma-dheere), oo Booqasho Ku Yimid Minneapolis...
Waxaa waraysiga Qaaday:: Xasan Dhooye | Sept 21, 2005 |
Waraysiga Wasiirka oo Dhammaystiran ka dhegeyso halkan (39:40)
Maxamed Maxamuud (Gacma-dheere) Maxamed Maxamuud (Gacma-dheere)
Wasiirka Horumarinta Reer Miyiga DFKMG waxa uu ugu horayn ka war bixiyey shirkii ay waftigii uu kamidka ahaa ee uu hoggaaminayey madaxweynaha DFKMG ay kaga qayb galeen magaalada New York iyo wixii Dawlada Federaalka safarkas uga qabsoomay.
Kaddib waxa uu ka hadlay sababta ay dawlada FKMG ay qaramada midoobey uga dalbatay in Soomaaliya cunaqabataynta hubka laga qaado.
Waxa kale oo uu ka hadlay booqashadiisii uu ku yimid magaalada gobolka Minnesota.
Waxa uu wasiirku xusay waxyaabaha sababta u ah khilaafka u dhexeeya xubnaha DFKMG. Waxana uu gaar u xusay arrimaha ku saabsan ciidamada safka hore. waxan auu yiri "Itoobiya dalka ma joogto, mana soo geli karto dal xor ah". Isaga oo intas ku daray in dalalka safka hore aysanba ku soo degdegayn imaatinka Soomaaliya.
Bixid: Wasiirka Maxamed Maxamuud (Gacma-dheere), Midig: C/Risaaq Maxamed Nuur
Wasiirka oo hadalkiisii sii wata waxa uu xusay sida ay ceeb u tahay waxyaabaha hadda ka taagan Soomaaliya iyo wixii ka dhacay ilaa bilowgii dagaalkii sokeeye. "Ceeb Soomaaliya arrinteedu waa dhaaftay."
"Adiguba Caqliguba caglaad leedahay carar maxa dhaama" waxa ay ka mid yihiin hadaladii uu yiri wasiirku markii uu ka hadlaayey tegitaanka Muqdisho.
Wasiirku waxa uu xusay in aan dawladdu ku talo jirin in ay weerar ku qaado Muqdisho. Haba yaratee dawladu dagaal uguma socoto Xamar.
Waxa kale oo uu sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay wada hadal. Isagoo intas ku daray in wasiiradu ay ku shiri karaan Muqdisho iyo in aan nabada raadinteeda laga daali doonin.
Wasiirka Horumarinta Reer Miyiga DFKMG, Maxamed Maxamuud (Gacma-dheere) waxa uu ka war bixiyey arrimaha la xiriira horumarinta reer miyiga. Waxa kale oo uu ka hadlay arrimaha laxiriir khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya iyo heshiisyada lala gelaya shirkadaha caalamiga ah.
Waxa kale oo uu ka hadlay arrimaha saxaafada Soomaalida.
Waraysiga Wasiirka oo Dhammaystiran ka dhegeyso halkan.... (39:40)
Waraysigii Xildhibaanada iyo Wasiir Kuxigeenka oo Dhamaystiran Halkan ka dhegeyso (1:30:09)